Tsy fanarahan-dalàna mahazatra… tsy ho lalàna | NewsMada
Tsy fanarahan-dalàna mahazatra… tsy ho lalàna
Mampiteny ny moana sy mampitambim-bava ny tsy fanarahan-dalàn’ny kandidà depiote sasany amin’izao fampielezan-kevitra izao. Mandeha ho azy? Na tsy misy na tsy hita loatra izay tena hoe fampiharan-dalàna… Tsy mahagaga raha samy manao izay saim-pantany; misy manao fanahy iniana, manararaotra… Mandra-pahoviana?
Nilaza tena hampihatra ny lalàna ny Ceni amin’izao indray mitoraka izao. Ho hita eo… Tsy inona izany fa ny fampiakarana ny tsy fanarahan-dalàna eny anivon’ny fitsarana, ny fanentanana ny olom-pirenena hitory. Hatramin’izao, tsy mbola nisy tsinona izay hoe voasazy noho ny fandikan-dalàna amin’ny fampielezan-kevitra.
Nahoana no tsy tan-dalàna? Nefa hoe ho mpanao lalàna… Misy ny mihevi-tena ho lehibe tsy mba diso. Tsy vitan’izany, tsy hita izay mba azo tahafina amin’ny fanajana lalàna? Na izay manao izany no heverina ho bado, tsy maharaka, diso, tsy mahalala ny fanao, maty antoka… Vokany, ny fahadisoan’ny maro no heverina ho lalàna.
Heverina ho ny fomba mahazatra no lalàna? Izay, ohatra, io petadrindrina mameno vodimontotra io: trano sy tambohon’olona, andrin-jiro… Toy izany koa ny filazan’ny sasany ampahibemaso fa “kandidàm-panjakana” na miaraka amin’ny mpitarika antoko na olom-panjakana toy izao na izatsy; eny, na hoe tsy miankina aza.
Rahoviana vao mba ho fomba amam-panao ny fanajana lalàna? Fa tsy ny fomba amam-panao amin’ny tsy fanarahan-dalàna no heverina ho lalàna… Soa ihany, eo ny vahoaka handinika sy hitsara: misy amin’ireo kandidà ireo ny efa hita fa tsy manjary amin’izay tsy fanarahan-dalàna izay. Mbola vao kandidà dia izany, vao mainka fa voafidy eo…
Mba tsy ny vahoaka ifotony indray no hiharan’ny sazy amin’ny tsy fanarahan-dalàna efa miseholany izao. Hanao ahoana tokoa ny olom-boafidy tsy tan-dalàna? Ahina tsy hahalala afa-tsy ny tenany sy ny tombontsoany manokana, mety hamoa-doza ho an’ny vahoaka sy ny firenena aza… Mila fandraisana andraikitra amin’ny fifidianana?